धुर्मुस सुन्तलीले मिचिएको सीमा फिर्ता मागेपछि (भिडियोसहित) - VOICE OF NEPAL
५ जेष्ठ २०७७, सोमबार १६:१५
काठमाडौं । श्रीमान् देशको नेतृत्व गरिरहेका हुन्छन् । यहीबेला कोरोना संक्रमणको महामारी फैलिन्छ । संक्रमणको जोखिम कम गर्न भन्दै सरकारले देशमा लकडाउन गरिरहेको हुन्छ ।
लकडाउनको विकल्प हुन सक्छ कि सक्तैन ? त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । तर, निरन्तर लकडाउन थपिरहन्छ । लकडाउनबाट हुन जाने नकारात्मक प्रभावबाट कसरी बाहिर निस्किन सकिन्छ ? सरकारसँग कुनै योजना छैन ।
सरकारले बिनायोजना लकडाउन थपिरहँदा जनता कोरोनाले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था आउला भनेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका श्रीमान्‌लाई सम्झाउँदै घरको कौसीमा निस्किएकी श्रीमतीले आफ्नै जमिनमा छिमेकीले बाटो खनेर गाडी गुडाएको देख्छिन्।
‘लकडाउनको मौका छोपेर अकार्का जग्गामा बाटो खनेर छिमेकीले त गाडी पो गुडाइसकेका रहेछन्,’ श्रीमतीले भन्छिन् । श्रीमान्‌ले यसबारे आफू अनविज्ञ रहेको बताउँछन् ।
श्रीमतीले दबाब दिँदै भन्छिन्, ‘यो छिमेकीको मिचाहा प्रवित्तिविरुद्ध कडा विज्ञप्ति निकाल ।’
आफ्नै जग्गा मिच्दा पनि श्रीमान् भने खासै गम्भीर देखिँदैनन् । आवेशमा आउन नहुने बताउँछन् । कूटनीतिक तवरले समस्याको समाधान खोज्‍नुपर्ने बताउँछन् ।
श्रीमती भन्छिन्, ‘को छिमेकी त्यो छिमेकी होइन छि ! मेकी हो ।
सिमाना मिचिएपछि मिचिएको जग्गा फिर्ता लिन आग्रह गर्दै दबाबस्वरूप माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन सुरु हुन्छ । फोनमा उनी भन्छन् । मण्डलामा कुर्लिएर जग्गा पाइँदैन, कोरोना भाइरस पाइन्छ ।
उनले विज्ञप्ति त निकाल्छन् । तर, त्यसमा नरम भाषा हुन्छ । त्यो पढ्दा लाग्छ, छिमेकीले गल्ती गरेकै छैन । त्यो पनि शौचालयमा लगेर टाँसेका हुन्छन् ।
तिमीलाई घरमुली कसले बनायो ? नेतृत्व गर्न सक्तैनौं भने हामी गर्छौं भन्दै श्रीमती वार्ता गरेर सबै राष्ट्रघाती निर्णय खारेज गर्न दबाब दिन्छिन् ।
श्रीमतीको दबाबपछि उनी हिँडेरै छिमेकीको घर पुग्छन् । तर त्यहाँ पुगेर पनि आफूले नदेखेको तर घरका सदस्यले भनेको भन्दै सीमाबारे हात जोडेर सोध्छन् । उनले तिम्रो घरमा तरकारीदेखि तेलसम्म आफूले दिएको भन्दै उल्टै हप्काउँछन् र चेक पनि थमाइदिन्छन् । चेकमा लोभिएर श्रीमान् घर फर्किन्छन् ।
पैसामा लोभिएर यतिकै फर्किएपछि यही नेतृत्वले मिचिएको सीमा फिर्ता गर्न नसक्ने भन्दै श्रीमती आफैं गएर सीमामा देशको झण्डा गाड्छिन् । छिमेकी उल्टै हप्काउँछन्, ‘यो त मेरो जग्गा हो, नभए नक्सामा हेर ।’
छिमेकीको मिचाहा प्रवृत्तिबाट आकुल भएकी उनले अर्का जग्गा नक्सामा हाल्दैमा आफ्नो हुन्छ, वीर गोरखालीका सन्तान हौं हामी….भन्दै खुकुरी देखाएपछि उनी भाग्छन् । अन्ततः मिचिएको सीमा उनले फिर्ता ल्याउँछिन् ।
‘हाम्रै हो लिपुलेक हाम्रै हो कालापानी, हाम्रै हो टनकपुर, हाम्रै हो नालापानी, हाम्रै हो अलमोडा’ गीत बज्छ । भिडियो सकिन्छ । यो भिडियोमा श्रीमान् भनेर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई संकेत गरिएको छ ।
श्रीमती भनेर जनतालाई र छिमेकी भनेर भारतलाई संकेत गरिएको छ, र भिडियो भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै लिम्पियाधुरासम्म सडक खोलेपछि त्यसको बिरोधमा हास्य कलाकार तथा सामाजिक अभियान्ता धुर्मुस (सीतारम कट्टेल) र सुन्तली (कुञ्जना घिमिरे) ले निर्माण गरेका हुन् । भिडियोमा श्रीमान् र छिमेकीको भूमिकामा सीताराम छन् भने श्रीमतीको भूमिकामा कुञ्जनाले अभिनय गरेकी छन् ।
सीमा विवाद लामो समयदेखि रहिरहेको तर समाधान नभएको अवस्थामा सरकारलाई दबाबस्वरूप भिडियो निर्माण गरेको सीताराम बताउँछन् । “समस्या समाधानका लागि नागरिकका तर्फबाट पनि दबाब सिर्जना होस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो”, उनी भन्छन्, “आफ्नो भूमि सबैका लागि प्यारो हुन्छ नै । त्यसमा पनि देशको सार्वभौमसत्ताको कुरा पनि जोडिएपछि यो इज्जत र गौरवका लागि पनि सीमा समस्या समाधान हुनु पर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो ।”
कलामार्फत् पनि देशका लागि खबरदारी गरेको भन्दै उनले आआफ्ना तर्फबाट खबरदारीको खाँचो औंल्याए । लकडाउनका कारण अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा सीमित स्रोत तथा साधनकाबीच भिडियो निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए ।